Yakanakisa 1 kiyi kuyera zviri nyore KJM-L8 ——Blood Pressure Bvunzo / Mhuri Yakamira Kugadzira uye Fekitori | FuluoEr
1 kiyi yekuyera zviri nyore KJM-L8 ——Blood Pressure Bvunzo / Mhuri Yakamira
Wrist mhando yemagetsi sphygmomanometer KJM-L8
Kutepfenyurwa kwezwi, inowoneka ruzha, yakakwira-tsananguro hombe skrini
Kubva pane chirevo cheiyo oscillographic dhizaini, ichi chigadzirwa chinogona kukurumidza, nenzira kwayo uye yakavimbika kuyera yako BP.
Muenzaniso nhamba: KJM-L8.
Ichi chigadzirwa chigadzirwa chemagetsi chekupima ropa icho chinogona kuyera systolic yakakwira kumanikidza, diastolic yakaderera kumanikidza uye kurova kwemoyo panguva imwe chete. Ichi chigadzirwa chinovakirwa pamusimboti weiyo oscillometric dhizaini, uye inogona kuyera BP yako nekukurumidza, nenzira kwayo uye yakavimbika. Makuriro ekushandisa: Ichi chigadzirwa chakakodzera chete vanhu vakuru. Nharaunda yekushandisa: Ichi chigadzirwa chakakodzera mhuri kana kiriniki yekushandisa.
Kugadziridza vhoriyamu: Iwo mukana wakanaka wechigadzirwa ichi kugadzirisa vhoriyamu. Chigadzirwa cheChigadzirwa: LCD inoratidzira dhijitari yekuratidzira skrini, hombe HD skrini uye kuverenga kwakajeka.
1. Voice Broadcast Unogona kugadzirisa vhoriyamu
2. LCD inoratidzira skrini yedhijitari, yakakwira-tsananguro hombe skrini,
3. SOC Core Algorithm, kuyerwa kwakaringana
4. Kuvhiya kumwe, kumanikidza kwekumanikidza
5. Irregular pulse kuongorora
Gross uremu: 161g chipo bhokisi saizi: 80 * 80 * 90MM Kurongedza huwandu: 50 PC kurongedza saizi: 42 * 41.5 * 20.0CM Gross huremu hwebhokisi rese: 8.8KGS
Kuyera chinzvimbo: ruoko
Kuyera renji: kumanikidza kweropa 0 ~ 280mmHg (0 ~ 37.3kpa), kupomba rate 40 ~ 195 kurova / min
Kuyera chiuno chechiuno: 13.5 ~ 21.5cm
Kuyera kunyatsoita: kukosha kweropa kukosha ± 0.4kpa (± 3mmHg), kupisa kwekuverenga kuverenga kukosha 5%
Kushanda nharaunda: inoshanda tembiricha: 10 ℃ ~ 40 ℃;
Unyanzvi hwekushanda: 40% ~ 85%
1. 99 inogadza ndangariro boka. Kwevanhu vaviri vane zuva nenguva
2. Measure range: Pressure: 0-299mmHg (0-39.9kPa) Pulse rate: 40-180times / min.
3. Kururamisa: Pressure: ± 3mmHg (mukati me ± 4kPa). Pulse rate: kurongeka kuri ± 5%
4. Ratidza: Dhijitari emvura kristaro kuratidza
5. Bhatiri: Mabhatiri maviri ealkaline
6.Rarama Izwi (Zvingakudetsera)
7. Hupenyu hwebhatiri: 300 nguva pasi pemamiriro e7 alkaline bhatiri ine 23 ℃.
8. Kushanda kwekushanda: 5.0 kusvika 40.0 ° C, -85% RH
9. Kuchengetedza tembiricha: -20.0 kusvika 60.0 ° C, -95% RH
10. Zviyero: 115x96 x59mm
11. Kurema: 180g (kusanganisa huremu hwebhatiri)
12. Auto magetsi adzima: kudzima kana pasina oparesheni kwema8 masekondi
K9000 chizvarwa chitsva cheiyo inotakurika okisijeni concentrator, modhi SK9000, inorema ingangoita 2.5kg, inogona kushandiswa mumotokari kana kumba, ino fashoni uye iri nyore oxygen concentrator.
SK9000 ine gumi nemaviri makuru mabasa kuchengetedza hupenyu hwemhuri yako uye hutano. Iyo inoshanda dhizaini inoshandisa mushandisi-inoshamwaridzika, 2L okisijeni kuyerera, basa reatomization, nguva yekuita, yakanyanya-inoshanda kompresa, kudzika kweruzha rwakadzika, yakakwira-tsananguro yekubata skrini, isina kunaka okisijeni ion kuchenesa, kutadza Alarm, isina waya kure kudzora, manomwe-marara firita kuchenesa, kwakakodzera vakadzi vane nhumbu, kupinza mamoresi sieve, nezvimwewo, mabasa acho akazara kwazvo.
SK9000's 2L oxygen kuyerera kunogona kugadziridzwa, uye iwe unogona kugadzirisa kuyerera kweoksijeni kuti ienderane nemuviri wako wega paunoda. Pamusoro pekuishandisa pamba, unogona zvakare kutora newe kwese kwaunoenda, uchibatanidza hutano muzvikamu zvese zvehupenyu hwako. Ehezve, mashandisiro ayo ari zvakare nyore kwazvo. Kutanga iwe unovhara muadapter yemotokari, wobva wareba kudzvanya kuti ushandise maitiro ekushandisa, uye pakupedzisira unoisa okisijeni inhaler yekufema oxygen nyore.
SK9000 inogona zvakare kushandiswa nevanhu vazhinji, kuitira kuti iwe nemhuri yako mugone kusununguka uye muishandise nerunyararo rwepfungwa. Vakwegura, vakadzi vane nhumbu, vadzidzi, vachena-makorari vashandi, nezvimwe vanogona kuzvishandisa vane chivimbo.
SK9000 yapasa iyo mbiri chitupa cheDAA / CE, uye mhando yakaedzwa pamatanho akasiyana. Ndinotenda anove akavimbika mudiwa muhupenyu hwako!
Pashure: 2L inotakurika imba oxygen jenareta SK9000 mota-yakaiswa okisijeni jenareta
Zvadaro: 5L Medical Oxygen Concentrator SD-05W -— Yechokwadi-nguva kuratidzwa kweokisijeni kusangana, mhedzisiro yeoksijeni kurapa inoonekwa.
24 Hora Ropa Kuomesa Pressure
Otomatiki Ropa Pressure Monitor
Yemagetsi Ropa Pressure Monitor
Glucose Yekutarisa System
Wepamusoro ruoko yemagetsi sphygmomanometer [Model n ...
YM2T9 Fetal Inodikanwa
Ruoko Electronic sphygmomanometer [Model numbe ...